HS:-Xalaada wadanka Somaliya oo halkii doorasho laga sugayey dagaalo sokeeye ay shacabkoodu qarka u saaran yahiin laga soo bilaabo gobolada waqooyi ilaa kuwa koofureed.
Hadaba dhawaan sida ay wax ku socdaan caalamka hal mar ayuu xaalada Somaliya sida ay isku bedeshay la yaabi doonaa siiba sasaan colaadeed gobolo Badán ka sóo muuqda.
Gobolada ay ka dhici doonaan dagaalada amaba rabshadaha waxaa ugu horeeya dagaalka Puntland iyo Somaliland marka laga soo tago dagaalo si lama filaan ah uga qarxi doona gobolka Sh/hoose iyo J/dhexe oo ay beelaha Hawiye qaarkood doonayaan iney dagaal kula wareegaan arintaas oo shirar ku wajahan ay maalmahii tagay Mogdishu ka socdeen abaabulkooda.
Arinta xaalada si rasmi ah wadanka dhan inuu faraha ka baxo oo doorasho danbe inba la haweysto amaba lagu riyoodo ay adkaaneyso waa marka nadaxweynaha Somaliya oo mudo kordhin doonayo qabiilka uu ka dhashay shir uu leeyahay waxaan u sameynayaa maamul goboleed uga furó magaalada Jowhar Hiiraane looga dhawaaqo maamul goboleed shacabkaas u gaar ah.
Shacabkii Somaliyeed oo la doonayey in xiligaan doorasho lagu mashquuliyo waxey isku diyaarinayaan abaabulka dagaalo sokeeye cawaaqibkeeda ay qaadi doonaan masuuliyiinta maanta joogta.
Xaalka Somaliya hadaan aqli kale oo lagu baajin karo dagaal sokeeye doorashona ay ku dhacdo waqtigii horey loo qorsheeyey 2016 dhibaatadu dalka oo dhan ayey ku baahi doontaa dhawaan weli xaqiiqada halkey jirto in la abaaro waa laga warwareeganyaa waana in ay doorasho ka dhacdo dalka si shacabku u helaan isbedel siyaasadeed dhab ah halkii colaad la gelin lahaa.
Rajo beel siyaadadeedkii ugu weynaa ayaa muuqda sidaasina waxaa laga sóo xigtay xildhibibaano baarlamaanka ka tirsan.
· admin on July 20 2016 08:45:50 · 0 Comments · 1083 Reads ·
14,905,291 unique visits